Gucci ọhụụ 'LIVE' nke Videozụ Edemede Ntanetị!
site na nhazi na 20-07-20
Arụ ọrụ a raara nye na Florence, etiti ọrụ servicetali, Gucci Live bu n'obi ime ka ahụmịhe nke ụlọ ahịa. Site na ndị na-agba ọsọ azụmaahịa na-adọga ịlaghachi ebe ọ bụla nso ọkwa dị iche iche, ụdị ndị okomoko na ndị na-ere ahịa na-emepụta ụzọ ọhụrụ iji jikọọ na ebe ahụ ...
Ọfịs na ụlọ ọrụ Olicom
A maara ụlọ ọrụ Olicom na ụlọ ọrụ mmepụta ihe Olicom na mbụ dị ka Huakai Shoes & Garments Co. Ltd ma dị na Jinjiang obodo nke bụ isi obodo akpụkpọ ụkwụ China. Nnọọ ịbịa leta anyị oge ọ bụla. Ọ na-ewe ihe dị ka nkeji iri site na ọdụ ụgbọ elu Jinjiang na ihe dịka 25 m site na ụzọ okporo ụzọ Jinjiang ...
Ndị # 127thCantonFair
A ga-etinye # 127thCantonFair na egwuregwu egwuregwu ịntanetị yana imepụta mkparịta ụka ga-ekwenye ntụkwasị obi na ịntanetị. Ọtụtụ puku ndị na-azụ ahịa na ndị na-egosipụta ihe ga-emekorita ibe ha nke ọma na ụbọchị iri. 'Izụ otu ihe nke ndị na - azụ ahịa ga - adị mfe ma gosipụta ...